Fitness – Yay Thu Ma
မင်္ဂလာပါနော်။ လက်မောင်း တွဲကျနေလို့ စိတ်ညစ်နေသူတွေအတွက် လက်မောင်းသားတွေ တင်းတင်းရစ်ရစ်ဖြစ်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းကိ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ နည်းလမ်း ၁ ခုံ (သို့) အရာဝတ္တုတစ်ခုကို နောက်မှာခံထားပါ။ ပြီးရင် လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ဖိထားပြီး အခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း မတ်ထားပါ။ ပြီးရင် ခန္တာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုအောက်ချ လိုက်ကိုကွေးလိုက်ပါ။ ၉၀ ဒီဂရီလောက် ကွေးရမှဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ပြန်မတ်ပါ။ ၁၀ ခေါက်လောက်လုပ်ပေးပါ။ နည်းလမ်း (၂) ဒိုက်ထိုးပေးရမှာပါ။ သိပ်တော့မလွယ်ကူပါဘူးနော်။ ပုခုံးကိုတန်းတန်းထားပြီး...
အ၀လွန်သူများ၊ ဗိုက်ခေါက်ထူပြီး လာသော အမျိုးသမီးများ အတွက် ပထမဦးစွာ ရှောက်ရွက် ကြမ်းများကို ရှာထားပါ။ ပုလင်း တစ်လုံးစီတွင် ရိုးရိုး သကြားသုံးဇွန်း (ဟင်းစားဇွန်း) စီထည့် ရပါမည်။ ပုလင်းများ တစ်လုံးစီတွင် ရှောက်၉ရွက် စီထည့်ပေးပါ။ေ၇ကျက်အေးများ ပုလင်းထဲသို့ အပြည့် ထည့်ပြီး အဆို့ပိတ်လျက် နေပူတွင် ကိုးရက် လှန်းပေးပါ။ ကိုးရက်စေ့လျှင် ဆေးဝါးအဖြစ် သုံးနိုင်ပြီ။ နံနက် တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ်...
သင်က အမြဲတမ်းလိုလို တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစားချင်နေပြီး ကိုယ် အလေးချိန် လျော့ဖို့လည်း ဆန္ဒရှိပါသလား။ ကယ်လိုရီအနည်းငယ်ဘဲ ပါဝင်တာတဲ့ ဘယ်အချိန်၊ဘယ်လောက်များများ စားစား ကိုယ်အလေးချိန် မတက်တဲ့ အစားအစာများကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီပန်းပွင့် ဂေါ်ဖီပန်းပွင့်က ဗီတာမင် C နဲ့ K တို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် အစိမ်းစားရင် ပိုပြီး အဟာရ ရှိပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ၂၅လောက်ဘဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး ခရမ်းချဉ်သီးမှာ Lycopene၊...
GYM ဆော့သူ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေ ဘယ်အချိန် ဘာစားသင့်သလဲ???
” Gym ဆော့ပြီး ထမင်းစားလို့ရလား၊ မစားပဲနေလိုက်ရင်ကော ? ” ” မနက်စာ မစားပဲရော လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရလား ?” ” ကိုယ်ရေထပ်ပြီး စစ်သွားချင်ရင် အစာကို လျှော့လိုက်ရမလား ? ” ဒီလိုဆင်တူမေးခွန်းတွေ မေးလာတိုင်း ဖြေရတာကြပ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခုစီရဲ့ အဖြေဟာ မေးသူရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ ဆိုင်သလို၊ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ ဆိုင်သေးပါတယ်။ အဆီများနေလို့ အဆီချချင်တယ်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏဖြစ်ဖြစ် အခုအရမ်းဝနေလို့...
Fitness / Healthy / Skin & Body
ဟိုးအရင်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ဂရိတ်ဖရု Diet ကတော့ အစာမစားခင်မှာ ဂရိတ်ဖရုသီးကို စားပေးမယ် ဒါမှမဟုတ် ဂရိတ်ဖရု ဖျော်ရည်ကို သောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျနိုင်မယ်ဆိုပြီး ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက သိပ္ပံနည်းကျနမှုတွေအပေါ်မှာ အခြေခံထားတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ဂရိတ်ဖရုမှာ ပိုမိုကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ရရှိနိုင်စေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေတော့ ရှိနေပုံပါဘဲ။ အစာမစားခင် အချိန်တွေမှာ ဂရိတ်ဖရုအရည် နည်းနည်းလောက် သောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်သာမက ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့...